April 12, 2021 - Achawlaymyar
ဒီ (၁၀) ချက်နဲ့ မညီမချင်း single အဖြစ်နေလိုက်ပါ
April 12, 2021 by Achawlaymyar
ဒီ (၁၀) ချက်နဲ့ မညီမချင်း single အဖြစ်နေလိုက်ပါ ၁။သင့်လက်ကိုတွဲပြီး သင်ကို official တွဲပြနိုင်တဲ့ ယောကျ်ားမျိုးကို မတွေ့မချင်း Single အဖြစ်နေလိုက်ပါ။ ၂။ညသန်းခေါင်မှာ သင့်ကို ချစ်တယ် ဆိုပြီးပြောဖို့အတွက် သင့်အိမ်ရှေ့ကိုရောက်လာတတ်တဲ့ ယောကျ်ားမျိုးကို မတွေ့မချင်း Single အဖြစ်နေလိုက်ပါ။ ၃။သင်နေရခက်နေတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုမှာဆိုရင် သင့်ရှေ့ကိုရောက်တတ်ပြီး ကူညီပေးတတ်တဲ့ ယောကျ်ားမျိုးကို မတွေ့မချင်း Single အဖြစ်နေလိုက်ပါ။ ၄။သင့်ကို ပျော်ရွင်အောင် ထားနိုင်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးကို မတွေ့မချင်း Single အဖြစ်နေလိုက်ပါ။ ၅။ကိုမှားသွားတယ် ဆိုတာကို ဘယ်လိုပြောရမလဲနဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ တောင်းပန်ရမလဲဆိုတာကို ခေါင်းမမာဘဲ ၊ အနိုင်ယူလိုစိတ်မရှိဘဲ ပြောတတ်တဲ့ ယောကျ်ားမျိုးကို မတွေ့မချင်း Single အဖြစ်နေလိုက်ပါ။ ၆။သင့်ဘက်က အမြဲပါပေးတတ်တဲ့၊ သင့်ကိုသာ အချောဆုံး၊အလှဆုံးလို့ … Read more
သူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်ထားတဲ့ စိတ်ပုပ်သူမှန်း သိသာတဲ့ လက္ခဏာ (၅) မျိုး သိုးရေခြုံထားတဲ့ဝံပုလွေတွေဟာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထဲမှာ၊ အပေါင်းအသင်းထဲမှာ စသဖြင့် ကိုယ်ကျင်လည်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းမှာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သူတော်ကောင်း ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ အတွင်းစိတ်ပုပ်သူတွေဆိုတာ ဘယ်လောက်ပဲ ဟန်ဆောင်ကောင်းကောင်း ဖုံးမရအောင် ပေါ်လာတတ်ကြပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သူတော်ကောင်း ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ စိတ်ပုပ်သူမှန်း သိသာတဲ့ လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁) နာမည်ကောင်းဝင်ယူတတ်တယ် ဟန်ဆောင်ကောင်းပြီး အတွင်းစိတ်ပုပ်တဲ့သူတွေဆိုတာ သူတစ်ပါးလုပ်ပြီးသားအရာတစ်ခုခုမှာ နာမည်ကောင်း ဝင်ဝင်ယူတတ်တဲ့သူတွေပါ။ ပင်ပန်းဖို့ဆိုခေါင်းရှောင်ကောင်းသလောက်၊ နာမည်ကောင်းရပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော်ပြီး နာမည်ကောင်းဝင်ယူလိုက်ရမှ ကျေနပ်တတ်တဲ့သူတွေပါ။ မသိရင် သူတို့ပဲ အပင်ပန်းဆုံးဆိုတဲ့ အချိုးမျိုးသိပ်ချိုးတတ်တဲ့သူတွေပါ။ (၂) သရုပ်မှန်ပေါ်လာတတ်တယ် လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ဟန်ဆောင်ကောင်းကောင်း ဇာတိသရုပ်မှန်ကို ကြာကြာဖုံးကွယ်မထားနိုင်ပါဘူး။ အခက်အခဲတစ်ခုခု၊ ပြသနာတစ်ခုခု … Read more
ချစ်သူကို ကောင်းစေချင်တဲ့ သူတွေတိုင်းမှာရှိတဲ့ အတ္တ ( ၅ ) ခု
ချစ်သူကို ကောင်းစေချင်တဲ့ သူတွေတိုင်းမှာရှိတဲ့ အတ္တ ( ၅ ) ခု ချစ်သူ ကို ကောင်း စေ ချင် တာ ၊ အ ဆင့် မြင့် မြင့် နေ စေ ချင် တာ တ ကယ် ချစ် တဲ့ သူ တိုင်းမှာ ရှိ တဲ့ ဆ န္ဒ တစ် ခု ပါ ။ ချစ် သူ ကို ကောင်း စေ ချင် စိတ် တွေ များ လာ တဲ့ အ ခါ ကိုယ့် ရဲ့ ဆ န္ဒ တွေ … Read more
ဘယ်လောက်ပဲ သစ္စာရှိတယ်ပြောပြော ရိုးသားမှုမရှိရင် သူစိမ်းတွေပါပဲ
ဘယ်လောက်ပဲ သစ္စာရှိတယ်ပြောပြော ရိုးသားမှုမရှိရင် သူစိမ်းတွေပါပဲ ရင်ခုန်သံတွေမအေးခဲဖို့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးလေးစားပါ ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်တယ်ပြောပြော လေးစားမှုရှိမှ ခရီးရှည်ကို ဆက်နိုင်ပါမယ် ။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခွင့်လွှတ်ပါ ဘယ်လောက်ပဲ မြတ်နိုးတယ်ပြောပြော ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိရင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာလည်းမရှိပါဘူး ။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သည်းခံပါ ဘယ်လောက်ပဲ ရင်ခုန်တယ်‌ပြောပြော သည်းခံခြင်းမရှိရင် ဝေးကွာရတာပါပဲ ။ တစ်ဦးရဲ့ စိတ်ကို တစ်ဦးကမြင်အောင်ကြည့်ပါ ဘယ်လောက်ပဲ သစ္စာရှိတယ်ပြောပြော ရိုးသားမှုမရှိရင် သူစိမ်းတွေပါပဲ ။ Credit Unicode ဘယ်လောက်ပဲ သစ္စာရှိတယ်ပြောပြော ရိုးသားမှုမရှိရင် သူစိမ်းတွေပါပဲ ရင်ခုန်သံတွေမအေးခဲဖို့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးလေးစားပါ ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်တယ်ပြောပြော လေးစားမှုရှိမှ ခရီးရှည်ကို ဆက်နိုင်ပါမယ် ။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခွင့်လွှတ်ပါ ဘယ်လောက်ပဲ မြတ်နိုးတယ်ပြောပြော ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိရင် … Read more
မတန်ရင် ကံ ကဖယ်တယ် (သို့) ကံ က ကယ်တယ်
မတန်ရင် ကံ ကဖယ်တယ် (သို့) ကံ က ကယ်တယ် ကျွန်မရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ချစ်ရတဲ့သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ အသည်းကွဲဝေဒနာခံစားရတဲ့အခါ ကျွန်မအမြဲ နားထောင်အကြံပေးဖြစ်တယ်။ အကြံပေးတယ်ဆိုတာက သိလို့ တတ်လို့ မဟုတ်ပဲ သူတို့ဝေဒနာကို နားနဲ့တင်မဟုတ် ရင်ထဲက ခံစားပေးတတ်လို့ ကိုယ့်သဘောဆိုရင် တော့ဖြင့် ဘယ်လိုဆိုတာလေး သူတို့ကိုပြန်ပြော ပြတာမျိုးလေးပါ။ သူတို့ နာကျင်တာတွေ သက်သာစေလိုစေငြား နှစ်သိမ့်အားပေး တာမျိုးလေးတွေ လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ သူတို့ကို ကိုယ်အမြဲ ပြောနေကျ စကားက ဖူးစာမပါရင် ဘာမှလုပ်မရဘူး ဆိုတာရယ်နဲ့ မတန်ရင် ကံကဖယ်တယ် ဆိုတာလေးပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ချစ်သူတွေ ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုး ချစ် လာကြလည်း ပြတ်ချင်ရင် ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ ပြတ်သွားကြတာ အများကြီးပါ။ ဖူးစာမပါရင် ချစ်သူနှစ်ဦး … Read more
အရင်ဆုံး လက်လွှတ်ပေးမယ့် မိန်းမတစ်ယောက် ရဲ့ မာနလေးတော့ထားတယ် မနေချင်တဲ့သူကို ဆွဲထားလောက်တဲ့အထိ ကျွန်မ မာနတွေ မမဲ့ချင်ဘူး … ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ပျော်လာမှာပါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးထားခဲ့တာပဲရှိတာပါ ။ တကယ်တမ်း ကိုယ့်အနားမနေချင်တော့မှန်းသိရင် ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် ကျွန်မ ဆွဲထားမနေတော့ပါဘူး ။ ကိုယ်က ဆွဲထားလို့သာ မြဲနေရတယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့မာနကို သိပ်ထိခိုက်တယ် ။ အခ်စ္မွာ မာနေတြ သံသယေတြ မလိုဘူးတဲ့ ။ ကျွန်မကတော့ ကိုယ့်ဟန်ကိုယ်ဖို့တတ်တဲ့ လက်ကျန်မာနလေးထားတယ် ။ ရင်တွေ ကွဲထွက်သွားပါစေ … ရင်ကွဲခံမယ် ။ တစ်သက်လုံး မျက်ရည်တွေ နောင်တတွေနဲ့တော့ ကျွန်မ မဖြတ်သန်းချင်ဘူး ။ တန်ဖိုးမထားတတ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထဲမှာ တန်ဖိုးမဲ့နေသလို ဘဝမျိုးနဲ့နေဖို့အထိ ကျွန်မ မိုက်ရူးရဲမဆန်းဘူး … Read more
တကယ့်အလှစစ်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မိန်းကလေးတွေပဲ ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်မယ့် အချက် ၅ ချက်
တကယ့်အလှစစ်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မိန်းကလေးတွေပဲ ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်မယ့် အချက် ၅ ချက် လူတစ်ယောက်ရဲ့အလှကို ဘာတွေနဲ့ သတ်မှတ်ထားကြလဲ။ သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ဖက်ရှင်အမိုက်စားတွေကြောင့်လား၊ သူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပုံစံကြောင့်လား။ တကယ့်တော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှစစ်ဆိုတာ ဒါတွေနဲ့ သက်ဆိုင်နေတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်း အရေးအပါဆုံး အချက်လေးတွေက သက်သက်စီရှိလို့နေပါတယ်။ (1) စိတ်ထားကောင်းမွန်မှု လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ထက် အရေးကြီးတာက အဲဒီ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထားပါ။ ရုပ်ဘယ်လောက်ပဲ ချောနေပါစေ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားနေတဲ့သူ၊ စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်ရှိနေတဲ့သူကိုတော့ ဘယ်သူကမှ သူဟာ ချောမောလှပတဲ့ သူတစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြမယ် မထင်ပါဘူးနော်။ တကယ်လို့ ရုပ်လေးကအသင့်အတင့်ရှိပြီး စိတ်ထားလေးကလှနေမယ်ဆိုရင် အဲဒီ့မိန်းကလေးဟာ တကယ့်ကို အတွင်းရော၊ အပြင်ပါ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ (2) ၾကင္နာတတ္မႈ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ကြင်နာတတ်တဲ့ … Read more
ချစ်သူကောင်းဖြစ်ရုံ နဲ့ ခင်ပွန်းကောင်းဖြစ်နိူင်ပြီလား
ချစ်သူကောင်းဖြစ်ရုံ နဲ့ ခင်ပွန်းကောင်းဖြစ်နိူင်ပြီလား ချစ်လို့အရာရာကို အလျော့ပေးတတ်တဲ့အချိန်ဆိုတာ ချစ်သူဘဝ သာယာချိန်လေးပဲရှိတာပါ။ ချစ်သူသက်တမ်းကြာလာတာနဲ့အမျှ ပြောင်းလဲမှုတွေတဖြည်းဖြည်းစလာပါလိမ့်မယ်။ အချစ်စစ်ဆိုတာ တကယ်မရှိဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ရှိတော့ရှိတယ်ရှားပါတယ်။ ချစ်သူဘဝမှာတောင် ချစ်သူကောင်းမပီသနိူင်တဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်ကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်မိခဲ့တဲ့မိန်းမသားဆိုတာ လောကမှာကံအဆိုးဆုံးသူပဲဖြစ်နေမှာပါ။ အချိန်တွေ ကြာလာတာနဲ့အမျှ သူ့အကြောင်းကိုယ်သိ၊ကိုယ့်အကြောင်းသူသိခဲ့ပြီပဲ ဘယ်အရာတွေကိုအလျော့ပေးပြီး ဘယ်အရာတွေမှာတင်းရမလဲဆိုတာ ချစ်သူအချင်းချင်းညှိနှိုင်းလို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ။ သို့ပေမယ့်အချိန်တွေသာကြာသွားခဲ့တယ်ကိုယ့်ဘက်ကပဲအရာရာကိုအလျော့ပေးခဲ့တာမျိုး၊ နားလည်ပေးခဲ့တာတွေများနေခဲ့လျှင်တော့ ဘယ်လောက်ထိချစ်နေပါစေနောက်ဆုတ်ဖို့အချိန်တွေရှိသေးတဲ့အတွက်စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ ချစ်သူကောင်းဖြစ်ရုံနဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းမဖြစ်နိူင်သလို ရုပ်ချောပြီးဝင်ငွေကောင်းကောင်းရှာနိူင်တဲ့ ယောကျ်ားတိုင်းကို အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းလို့မတွေးစေချင်ဘူး။ သစ္စာ၊မေတ္တာ၊နားလည်နိူင်မှုတွေ မရှိရင်အိမ်ထောင်ဆိုတာ လွတ်ရက်မရှိ ထောင်တစ်ခုလိုပဲချောင်ပိတ်မိနေပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်ပြု၊ဘုရားတည်၊ဆေးမှင်ရည်စုတ်ထိုး ဤသုံးသုံးချက်မပိုင်လျှင်နောင်ပြင်ရန်ခက်သည့်အမျိုးဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင်း နောင်တတွေနဲ့ဘဝကိုမဖြတ်သန်းချင်လျှင် မိမိရဲ့ချစ်သူက အနာဂတ်ရဲ့ခင်ပွန်းကောင်း ဖြစ်နိူင်၊မဖြစ်နိူင်ကို ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလက်တွဲသွားရမယ့်မိမိကိုယ်တိုင် မိမိရဲ့စိတ်ကိုမညာစတမ်းဝေဖန်သုံးသပ်ရွေးချယ်မမှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Credit Unicode ချစ်သူကောင်းဖြစ်ရုံ နဲ့ ခင်ပွန်းကောင်းဖြစ်နိူင်ပြီလား ချစ်လို့အရာရာကို အလျော့ပေးတတ်တဲ့အချိန်ဆိုတာ ချစ်သူဘဝ သာယာချိန်လေးပဲရှိတာပါ။ ချစ်သူသက်တမ်းကြာလာတာနဲ့အမျှ ပြောင်းလဲမှုတွေတဖြည်းဖြည်းစလာပါလိမ့်မယ်။ အချစ်စစ်ဆိုတာ … Read more
ရေစက်လား ရေစက်လား…. ဆုံရမယ်ဆိုတဲ့အခါ တစ်နိုင်ငံခြားနေရင်တောင် တွေ့ဖို့တွေ အကြောင်းဖန်လာရင်း ဖူးစာဖက် ချစ်ခင်ကြရတယ် ။ ဆုံဆည်းရတဲ့ သက်တမ်းတွေလည်း ကုန်ရော တစ်မြို့တည်းနေကြရင် တောင် အမှတ်တမဲ့ ဆုံတာမျိုးတောင် မရှိတော့ဘူး ။ ဒီတော့လည်း ရေစက်ဆိုတဲ့ အရာမှာလည်း မမြင်နိုင်တဲ့ သက်တမ်းလေးကတော့ ပါလေးသေးတာပဲဆိုတာ သတိမမေ့ဖို့လိုသေးတယ် ။ ချစ်နေတုန်းတန်ဘိုးထားပြီး ၊ တစ်နေ့တော့ အကြောင်းကြောင်းနဲ့ ခွဲခွာရဦးမယ်ဆိုတာကိုလည်း မမေမလျော့နဲ့ ပြင်ဆင်ထားရဦးမယ် ။ ခွဲခွာရမယ်ဆိုရင်တောင် အမှတ်တရတွေနဲ့ နွေးထွေးမှုလေးသာကျန်ခဲ့ပြီး နာကျည်းစရာမကျန်ခဲ့တော့တဲ့ နှုတ်ဆက်ခြင်းတွေပါရင် အကောင်းဆုံးပေါ့ မာရင်ရင် Unicode ရေစက်လား ရေစက်လား…. ဆုံရမယ်ဆိုတဲ့အခါ တစ်နိုင်ငံခြားနေရင်တောင် တွေ့ဖို့တွေ အကြောင်းဖန်လာရင်း ဖူးစာဖက် ချစ်ခင်ကြရတယ် ။ ဆုံဆည်းရတဲ့ သက်တမ်းတွေလည်း ကုန်ရော တစ်မြို့တည်းနေကြရင် … Read more
မိတ်ကပ်လိမ်းစရာမလိုဘဲ သဘာဝအတိုင်းလေး လှနေစေဖို့ လိုက်နာရမယ့် အချက် (၁၀) ချက်
မိတ်ကပ်လိမ်းစရာမလိုဘဲ သဘာဝအတိုင်းလေး လှနေစေဖို့ လိုက်နာရမယ့် အချက် (၁၀) ချက် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ မိတ်ကပ်လိမ်းရတာက အချိန်ပေးရပြီး စိတ်ရှည်ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ မိတ်ကပ်လေးလိမ်းမှ ပိုထူးခြားသွားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပိုရှိလာပါတယ်။ မိတ်ကပ်ဘယ်လိုလိမ်းရင် ပိုလှမလဲဆိုပြီး Tutorial Video တွေလိုက်ကြည့်ရတာလည်း မိန်းကလေးတွေပါပဲ … ။ မိတ်ကပ်မလိမ်းဘဲ သဘာဝအတိုင်း လှနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ မိတ်ကပ်ကို နေ့တိုင်းလိမ်းတာက သင့်အသားအရေအတွက် ရေရှည်မှာမကောင်းပါဘူး။ ဒီတော့ မိတ်ကပ်မလိမ်းဘဲ လှမြဲတိုင်း လှနေစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်နော် … ။ (1) တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုရှိပါစေ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေတာက ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကို လန်းဆန်းစေပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတစ်ခါတော့ ပုံမှန်ရေချိုးပေးပါ။ သင်က မနက်စောစော တစ်ခါပဲ ရေချိုးတတ်တယ်ဆိုရင် ညဘက် … Read more